Myanmar Health Updates Journal | ဆောင်းပါး
မိုဘိုင်းဖုန်း application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Whats Application ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ WhatsAppitis ရောဂါ ...
Health Updates Journal, Vol(2), Issue(155) လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ တစ်နေ့ တွင် ကော်ဖီလေးခွက်သောက်ခြင်း ...
(၁)ခြေပစ်လက်ပစ်ခုန်ချခြင်း (the freefall)) မှောက်လျက်အနေအထားဖြင့် လက်နှစ်ဖက်မြှောက်ကာ ...
လေထုထဲတွင် ကာဗွန်ဒိုက်အောက်ဆိုဒ်ပါဝင်မှု မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် လူသားတို့အစာအာဟာရ ထိခိုက်နိုင်
Health Updates Journal No. 118 လေထုထဲတွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပမာဏ အလွန်မြင့်တက်လာခြင်းသည် ...
ချစ်သူများနေ့ လက်ဆောင်အရောင်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပညာရှင်များသုံးသပ်မှုများ
Health Updates Journal, Vol(2), Issue(156) Valentine’s Day ချစ်သူများနေ့ နှင့်ပတ်သက်၍ ...
Health Updates Journal No.196, Cover
Health Updates Journal, Vol(2), Issue(187) လေ့လာမှု အသစ်တစ်ခုက အချို့ ဆီးချိုဆေးများသည်အရိုးတွင်း တွင် အဆီများစုဝေးမှု ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေ ပြီး အရိုးကျိုးနိုင်ခြေ ပိုများစေသည်ဟု သတိပေးခဲ့သည်။Rosiglitazone အမျိုးအစား Avandia အမည်ဖြင့် ...
အင်တာနက်အသုံးပြု၍ မိမိဖာသာရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး
Health Updates Journal No. 170 တိုးတက်လာသည့် နည်း ပညာများကိုကျွမ်းကျင်စွာ သုံးတတ် သူများ က မိမိ၌ကြုံတွေ့နေရသည့် ပြဿနာများကို အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေခြင်းက ထမင်းစားရေသောက် လုပ်ရိုး လုပ်စဉ်အလေ့အကျင့်တစ်ခု သာ ဖြစ်လေသည်။ သို့သော်လည်း မိမိဘ၀အတွက် ...
Health Updates Journal No. 169 အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံမှာ လိုင်ဘေးရီးယားဟာ အီဘိုလာကင်းစင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရေးအဖွဲ့က မေ ၉ ရက်မှာ ကြေညာ ခဲ့တယ်။ လိုင်လေးရီးယားမှာ အီဘို လာကြောင့် လူ ၄၇၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ၄၂ ရက်အတွင်း ...
“စွဲဆောင်မှုရှိသော ယောကျာ်းများသည် တစ်ကိုယ်ကောင်း ပိုဆန်”
Health Updates Journal No.158 လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ စွဲဆောင် မှုရှိသော အမျိုးသားများသည် စွဲ ဆောင်မှုရှိသော အမျိုးသမီးများ ထက် ပိုမိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန် ကြသည်ဟု သိရသည်။ ထိုလေ့လာမှု ကို Brunel University London မှ သုတေသီများသည် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားအကြား ...
Health Updates Journal, Vol(2), Issue(156) Valentine’s Day ချစ်သူများနေ့ နှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ပညာရှင်အနေ နှင့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းအသုံး အဆောင်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အရောင်များသုံးသပ်ရာတွင်- -မရမ်း၊ ခရမ်းရောင်လာဗင်ဒါ အရောင်သည် လက်ခံသူအပေါ် ...
Health Updates Journal, Vol(2), Issue(155) လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ တစ်နေ့ တွင် ကော်ဖီလေးခွက်သောက်ခြင်း သည် အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ကို လျော့ချပေးသည်ဟု သိရသည်။ Yale လူထု ကျန်းမာရေးကျောင်းနှင့် အမျိုးသားကင်ဆာကျောင်းမှ သုတေ သီများသည် ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်း ...
Health Updates Journal Vol(139) အလုပ်ခွင်အတွင်း စိတ်ဖိစီးမှု များနှင့် အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ စိတ်ဖိစီးမှုပြေပျောက်ရန် ဘီယာ အေးအေးကို ဖွင့်ဖောက်သောက်သုံး လေ့ရှိကြသည်။ ယခုလေ့လာမှုအရ အပတ်စဉ်အရက်အနည်းငယ် (၅ယူ နစ်)သောက်သုံးခြင်းသည် သုက်ပိုး စွမ်းရည်ကို ...
Health Updates Journal Vol(139) ကော်ဖီတွင်ပါဝင်သော ကဖိန်း ဓာတ်သည် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်ပုံချင်း မတူညီ ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ၎င်းင်းသည် မျိုး ရိုးဗီဇဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက် ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုလေ့လာမှု အတွက် ဘောစတွန်မြို့ရှိ ဟားဗတ် ...
ဘူးမှုတ်သောကလေးငယ်နှင့် ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ ဖြိုးမှု
Health Updates Journal No,(134) ကလေးငယ်များသည် စကားမ ပြောတတ်ခင်ကာလများတွင် မိခင် ဖြစ်သူနှင့် ““ဘူး””မှုတ်ခြင်းဖြင့် တစ်ခုခု ပြုလုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပြောဆိုတတ် ကြပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ လိုဝါ တက္ကသိုလ် စိတ်ပညာဌာနမှ ဂရော့ လူးဝစ်နှင့် ...